Download MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK | downloadAPK.net
TOOLS » MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ)
4.7/5 - 86 votes
The description of Download MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK
MM Topup အပလီကေးရှငျးလေးဟာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဆကျသှယျရေး အျောပရတော လေးခုရဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှေ၊ ဖုနျးငှဖွေညျ့ခွငျး၊ တခွားသော အထူးဝနျဆောငျမှု ပရိုမိုးရှငျး သတငျးအခကျြအလကျ အစရှိတာတှကေို ဒီ အပလီကေးရှငျးလေးထညျ့ထားရုံနဲ့ လှယျလှယျကူကူ အဆငျပွစှော သုံးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဤ အပလီကေးရှငျးမှာတော့ ဖုနျးငှဖွေညျ့ကဒျမှာ ပါရှိတဲ့ ပငျနံပါတျကို ရိုကျထညျ့စရာမလိုဘဲ အလှယျတကူ စကငျဖတျပွီး ဖုနျးငှဖွေညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။ ပငျနံပါတျအပွငျ ငှဖွေညျ့ကဒျနဲ့ပါရှိသော ကြူအာ ကုတျအား စကငျဖတျပွီးလဲ ငှဖွေညျ့နိုငျပါသေးတယျ။
မိမိဖုနျး၌ အသုံးပွုနသေော sim cardအပျေါ မူတညျပွီး
(ဖုနျးဘဖွေညျ့ခွငျး, ငှလေကျကနျြစဈခွငျး, call centerသို့ဆကျသှယျခွငျး, ဖုနျးနံပါတျစဈဆေးခွငျး, internet pack မြားဝယျယူခွငျး, ဖုနျးငှခြေေးယူခွငျး, ဖုနျးငှလှေဲခွငျး) စသော လုပျဆောငျခကျြမြားကို ဒီ အကျပလီကေးရှငျးလေးကို သုံးပွီး လှယျလှယျကူကူ လုပျဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
(Ooredoo,Mytel,Telenor,MPT ) operator
လေးခု၏ USSD codesမြားကို တဈစုတဈဝေးတညျး ဖျောပွထားပါသညျ။ဒီ့အပွငျ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ ပွောငျးလဲနသေော operatorလေးခု၏ ဒတောpackဝယျယူမှုနှုနျးထားမြား,ဝနျဆောငျမှုမြား,promotionမြားကို လဲဖျောပွထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ မကျြခွမေပကျြ ကွညျ့ရှုနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ MM Topup mobile application လေးဟာ ဆိုရငျတော့ဖွငျ့ လူကွီးမငျးတို့အနနေဲ့ ဖုနျးအျောပရတော လေးခုရဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှကေို အခြိနျကုနျခံစရာမလိုဘဲ တဈစုတဈဝေးတညျး လှယျလှယျကူကူ အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
MM Topup အပလီကေးရှင်းလေးဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လေးခုရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ တခြားသော အထူးဝန်ဆောင်မှု ပရိုမိုးရှင်း သတင်းအချက်အလက် အစရှိတာတွေကို ဒီ အပလီကေးရှင်းလေးထည့်ထားရုံနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ အဆင်ပြေစွာ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤ အပလီကေးရှင်းမှာတော့ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်မှာ ပါရှိတဲ့ ပင်နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူ စကင်ဖတ်ပြီး ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်နံပါတ်အပြင် ငွေဖြည့်ကဒ်နဲ့ပါရှိသော ကျူအာ ကုတ်အား စကင်ဖတ်ပြီးလဲ ငွေဖြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
မိမိဖုန်း၌ အသုံးပြုနေသော sim cardအပေါ် မူတည်ပြီး
(ဖုန်းဘေဖြည့်ခြင်း, ငွေလက်ကျန်စစ်ခြင်း, call centerသို့ဆက်သွယ်ခြင်း, ဖုန်းနံပါတ်စစ်ဆေးခြင်း, internet pack များဝယ်ယူခြင်း, ဖုန်းငွေချေးယူခြင်း, ဖုန်းငွေလွှဲခြင်း) စသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဒီ အက်ပလီကေးရှင်းလေးကို သုံးပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေးခု၏ USSD codesများကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ဒီ့အပြင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသော operatorလေးခု၏ ဒေတာpackဝယ်ယူမှုနှုန်းထားများ,ဝန်ဆောင်မှုများ,promotionများကို လဲဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်ခြေမပျက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MM Topup mobile application လေးဟာ ဆိုရင်တော့ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ဖုန်းအော်ပရေတာ လေးခုရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အချိန်ကုန်ခံစရာမလိုဘဲ တစ်စုတစ်ဝေးတည်း လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK for Android 4.1+
Update on 2020-02-20
File size 6.274.599 bytes
What's new မြန်မာဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များအား လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ scan ဖတ်ပေးနိုင်သော apk လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. LATEST. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2020-02-20, 6.274.599 bytes)
2. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2020-02-16, 7.700.007 bytes)
3. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2020-01-09, 5.553.639 bytes)
4. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2019-12-23, 5.787.111 bytes)
5. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2019-12-10, 4.696.716 bytes)
6. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.3 APK (2019-12-01, 4.696.715 bytes)
7. MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ) 1.2 APK (2019-11-19, 4.843.572 bytes)
8. Myanmar EasyTopup 1.2 APK (2019-11-14, 7.647.328 bytes)
Similar to "MM TopUp(ငှဖွေညျ့ကဒျစကငျနာ)"
Mobile Ayaung Sayin